FBC - Dureewwan Xaaliyaanii fi Faransaay dhimma baqattootaa irratti mari’achuuf jedhu
Dureewwan Xaaliyaanii fi Faransaay dhimma baqattootaa irratti mari’achuuf jedhu
Finfinnee, Waxabajjii 7, 2010 (FBC) Karoorri Guddinaa fi Jijjiiramaa biyyattii hirmaachisaa fi kan waaraa ta’u akka qabu ibsame.
Koomishiniin Pilaanii Biyyaalessaa Faanaa Biroodkaasting Korporeet waliin tumsuun mata- duree ‘Gamaggama fi Hordoffii Guddinaa fi Jijjiiramaa; Eessatti fi Akkamitti madaalamuu qaba’ jedhu irratti waltajjii marii geggeesseera.
Waltajjii kana irratti waraqaaleen qorannoo karoorri jijjiiramaa gama damee dhuunfaan fi damee misooma magaalaan maala akka fakkaatu irrattii dhihaatanii mariin irratti geggeffameera. Waraqaalee qorannoo dhihaatan keessaa mata-duree “Guddinaa fi Jijjiiramni maali? Guddina yeroo jedhamus maali? jedhu kan qabu Waldaa Ogeeyyii Dinagdee irraa kan ta’an Doktar Taaddale Farreden dhihaateera.
Waraqaa qorannoo kanaan Jijjiiramni (transformation) waantota sadii, Isaanis: Dinagdee, hawaasummaa fi naannoo qabaachuu akka qabu, jijjiiramni jira kan jedhamu isaan sadan waliin yeroo deeman akka ta’e ibsameera.
“Bara 2025tti tarree biyyoota galii giddu-galeessaa qabanii hiriiruu fi galma misoomaa waaraa milkeessuu nurraa eegama” kan jedhus waraqaa kanaan dhihaateera. Gama kanaan, barri karooraa jalqabaa xumuramee inni lammaaffaa walakkeeffamus, jijjiiramoonni galmaa’an jiraatanis, gahaa akka hin-taane ibsameera. Qonna irratti hammi oomishaa dabaluusaa- ta’us gahaa akka hin-taane, akkasumas daldalli alaa baroota karooraa lamaanittuu fooyya’uu akka hin-dandeenye, ibsameera. Carraa hojii ilaalchisees bara karoorichaatti sadarkaa barbaadamuun carraa hojii uumuun akka hin-danda’amne eerameera. Gama sharafa alaanis sharafi alaa walakkaa Bara Guddinaa fi Jijjiiramaa Lammaaffaatti argame fi carraaqiin guddisuuf taasifamus gadi aanaa ta’uun isaa ibsameera.
Waltajjii kana irratti walumaagalatti gamaggamni Karoora Guddinaa fi Jijjiiramaa mootummaan qofa osoo hin-taane, dhaabbilee caasaa mootummaatiin ala jiraniinis geggeffamuu akka qabu eerameera.
Oduuwwan Biroo « Ministirri Dhimma Alaa Ameerikaa bu’aa Yaa’ii Dureewwan Ameerikaa fi Kooriyaa Kaabaa irratti Pireezdaantii Kooriyaa Kibbaa waliin mari’achuuf jedhu	Tuurk kaaba Iiraaqitti milishoota Kuurd galaafatte »